Oiri Yakabikwa Bronze Yakapararira Bathroom Sink Faucet
Kicheni Faucet, Pot yekuzadza, Mabhomba ekugezera
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW-Oiri Yakashongedzwa Bronze Yakapararira Yekugezera Sink Faucet
WOWOW-Mafuta Rubhabhu Bronze Yakapararira Bathroom Sink Faucet
Rated 4.81 Kunze kwe5 yakavakirwa 16 kasitoma ratings
(16 kasitoma wongororo)
Kugadziriswa Kwemvura Nyore
Inoratidzira iri nyore, rakarongedzwa dhizaini, faucet inoita kuti iwe ugone kugadzirisa zviri zviviri huwandu hwemvura uye tembiricha nemaipi maviri emuchinjiko
Aerated Rukova Yekutsva Kwezuva Nezuva
Kuendesa kusvika kumarita anosvika 1.5 paminiti, faucet yekugezera inopa rwizi rwakasimba rwechoto, zvichiita kuti ive yakanakira kuchenesa kwemazuva ese. Spout pakukwirira, ichikupa kukwana kwakakwana pasi pespout.
2320300ORB yekumisikidza mirairo
Sarudza nyika Aland IslandsAfuganisitaniArubhaniyaArujeriyaAmerican Samoathe nationalAngolaAngwiraAntarcticaAndiguya neBhabhudhaArgentinaArumeniyaArubha OsitireriyaOsitiriyaAzabhaijaniBhahamasiBhahareniBhangiradheshiBarbadosBherarusiBelauBherujiyamuBelizeBeninBhemudhaBhutaniBorivhiyaBonaire, Saint Eustatius na SabaBhoziniya neHezegovhinazimbabweBouvet IslandBhuraziriBritish Indian Ocean TerritoryBhuruneyiBharugeriyaBurkina FasoBurundiKambodhiyaKameruniKanadhaKepu VhedhiCayman IslandsYepakati Ripabhuriki AfrikaChadhiChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsKorombiyaKomorosiCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Zvitsuwa KukuKosita RikaKiroshiyaKiyubaCuraçaoSaipurasiCzech RepublicDhenimakiJibhutiDhominikaRipabhuriki DhominikaEkwadhoEgyptE SavhadhoIkwetoriya GiniEritreaEsitoniyaIthiyopiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinirendiFuranziFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiyaGeorgiaJerimaniGhanaGibhurataGirisiGirinirendiGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiAkanzwa Island uye McDonald IslandsHondurasHong KongHangariAisirendiIndiaIndonezhiyaIranIrakiAyarendiVechiwi ManIzirayeriItariIvory CoastJamaikaJapaniJerseyJodhaniKhazakisitaniKenyaKiribatiKuwetiKijisitaniLaosRativhiyaRebhanoniLesothoRaibheriyaRibhiyaLiechtensteinRituaniyaRukuzemubhoguMacaoMadhagasikaMalawiMarazhiyaMarudhivhuMaliMaltaZvitsuwa MasharoMartiniqueMauritaniyaMorishiyasiMayotteMekisikoMaikironezhiyaMorodhovhaMonakoMongoriyaMondenegiroMotseratiMorokoMozambikiMyanmarNamibhiyaNauruNeparoNetharenziNew CaledoniaNyuzirendiNikaraguwaNaijaNaijeriyaNyu Tsitsuwa NofokuMawodzanyemba KoriyaNorth MacedoniaMaodzanyemba Zvitsuwa MariyanaNoweyiOmaniPakisitaniPalestinian TerritoryPanamaPapa Nyu GiniParaguayPeruFiripainirhodesiaPorendiPutugaroPota RikoKwatakudzokeranaRomaniyaRashiyaRwandaSão Tomé naPríncipeSaint BarthélemySendi HerenaSendi Kitsi ne NevhisiSendi RusiyaSaint Martin (chiDutch chikamu)Saint Martin (French chikamu)Saint Pierre uye MiquelonSendi Vincent neGirenadhiniSamoaSan MarinoSaudhi ArabhiyaSenegalSerbiaSecheresSierra LeoneSingapowoSirovhakiyaSirovhinyiyaZvitsuwa SoromoniSomariaChamhembe AfrikaSouth Georgia / Sandwich IslandsChammhembe KoriaSouth SudanSpeiniShiri RangaSudhaniSurinameSvalbard uye Jan MayenSikwazirendiSiwidheniSiwizarendiSiriyaTaiwanTajikisitaniTanzaniaTairendiTimor-LesteTogoTokerauTongaTrinidhadhi neTobhagoTunisiyaTekiTekimenisitaniVokuTurkey zveTurks IslandsTuvaluUgandaUkireniMubatanidzwa Arabhu EmeretsiZimbabwe (UK)United States (US)United States (US) Minor Outlying IslandsUruguayUzebhekisitaniVanuatuVaticanVenezuelaVietnamMhandara Islands (British)Mhandara Islands (US)Wallis uye FutunaWestern SaharaYemeniZambiazimbabwe
Kubva pamakumi mana kusvika gumi neshanu intshi yakapararira yekugezera faucet 4ORB mu 16-gomba kukwira, iyo nzvimbo inogadziriswa pane zvaunoda chaizvo.
Yakaderera-kiyi yakasvibirira mune yakachena dema kupedzisa, yakasarudzika yakakwirira skwele dhizaini yakakodzera kugadzira yemazuva ano uye yekirasi yekushongedza yekushongedza maitiro.
Inokodzera imba yerenda, mutsva wekodhi, imwe-imba, mota kumba, tereya yekufamba uye kushandiswa kwemhuri.
Yakasimba inobata mu ergonomics dhizaini, yakakodzera saizi iri nyore kutonga, yakagadzikana kutendeuka.
Unogona kuishandisa nekungoshandisa kushoma uye nenzira yakapusa.
Nzira Yemvura: Rukova
Feature yeMvura: Yakavhenganiswa Kupisa uye Cold
Dzvinyiriro dzemvura: Minimum 0.5 bar, 1.0 bara yakakurudzirwa
Main muviri zvinhu: Yakagadzika Brass Kuvaka
Vharu: Ceramic Disc Cartridge
Handle zvinyorwa: Zinc-Alloy
Kupedzisa: Oiri Yakasukwa Bronze
Kuisirwa Rudzi: Deck Yakakwira
Nhamba yeZvikamu Zvinodikanwa: 3
Max Deck Ukobvu: 1.38 ″
Mvura inotonhora & inotonhorera yemvura inobviswa, unogona kutora zvibato kunongedza kune chero nzira sezvaunoda.
Yakakosha Kubviswa Aerator
Yakanyanya kushanda aerator inogona kugovera kuyerera, inogona kuchengetedza inodarika 50% mvura.
Iyo aerator inokanganisika, unogona kuishambidza kana kuitsiva nyore.
Zviri nyore kudzora huwandu hwemvura uye tembiricha chaiyo.
360-degree kutenderera dhizaini kuti ishandiswe nyore.
Kurumidza Batanidza Dhizaini
Chekutanga chekusika nekukurumidza chinongedza kuvaka.
Zvirinyore kuisa wega pasina pombi.
Izvo zvinongedzo zvakasungwa zvakasungwa kuburikidza nehunyanzvi, hapana kuvuza.
Solid Brass Chinyorwa
Solid yendarira zvinhu zviri nani pane imwe simbi
Hapana chikonzero chekushushikana nezve ngura, matambudziko ekuora.
Yakakwirira-mhando zvinhu, kureruka kwekugadzirisa, yakakwirira kugadzikana, yakareba uchishandisa hupenyu.
SKU: 2320300ORB Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: bonde musanganiswa, matatu buri, Mbambo mbiri
12.5 x 10.1 x 3 inches
K *** e2020-06-11
Ini ndaizeza zvishoma kutenga chinhu ichi nekuda kwemutengo wakaderera kwazvo. Ndagara ndichitenga mhando idzi dzefaucet kubva kuzvitoro zveKuvandudza Imba uye ndabhadhara madhora mazana matatu + kune yega yega. Mushure mekuisa iyi mune yangu yekugezera yekugezera ndakafadzwa nekugadzirwa kwayo. Zvese zvinongedzo zvaive zvendarira uye ese magaskets akagadzirwa zvakanaka kwazvo. Simbi yekupedzisa inoita kunge yakaitwawo zvakanaka kwazvo. Kuisa kwaive nyore kwazvo.
L *** a2020-06-16
Ini ndakaraira izvi nekuti zvaive zvakafanana nezvimwe muImba Depot neLowe zvehafu yemutengo. Ini ndaida chaizvo maitarisiro aimboita akaiswa.
B *** o2020-06-19
Use izvi mune yeupfu kamuri makeover. Anofara kwazvo, kunyanya pamutengo wakabhadharwa. Yakasvika zvakachengetedzwa zvakanaka. Maitiro akanaka, akakwana uye kupedzisa. Pombi pachayo inonzwa kurema kurema uremu izvo zvakaita kuti ndibvunze mhando, asi zvinoshanda chaizvo. Iwo anopisa / anotonhora mapfundo anotendeuka mushe uye anoshanda nemazvo. Iyo yekumisikidza kit uye nekukurumidza kubatanidza kwakaita kuiisa iyo mhepo. Kwete 100% chokwadi chekuti ndaizoisa izvi mukushandisa zvine simba, nharaunda inoda asi ndichiziva zvandinoziva, ini ndaizotengazve izvi.
Kupedza kwakanaka kunoratidzika kusimba. Mibato inonzwa yakasimba uye inotaridzika munzvimbo nezvose zviri mumba. Kukosha kwakanaka, kunyanya kune yakapararira. Chenesa gadza mune nyowani isina maturo pamusoro. Cherekedza iyo dhurera inokwira kumusoro / pasi nekusundira pane inomira uye kwete ne Push / dhonza pabhawa. Ini ndinoda icho chimiro nekuti inoramba ichitarisa yakachena pombi.
A *** l2020-06-27
Pamutengo wepombi iyi, ndiri kunyatsofara nekutenga kwedu. Murume wangu akaiisa patafura yedu tisati taisa kabhineti saka kuiswa kwaive nyore. Iyo ine yakawanda yekutaridzika kwemaindasitiri kwairi, asi ini ndinoifarira. Iyo yaive zvakare yakarongedzwa zvakanyatsonaka izvo zvandaida kuverengera kuti hapana chaizomarwa.
Z *** t2020-06-29
Ini ndatenga maviri eaya uye kukosha kwemutengo ukuru. Pombi yacho yakasimba uye inovakwa zvakanaka. Kubatana kwakanaka uye ini handisati ndamboita dambudziko rekudonha. Zviri nyore kuisa, zvinotaridzika zvakanaka uye zviri nyore kuchenesa. Ini ndaikurudzira.
L *** e2020-07-12
Ndiri kufara kwazvo nepombi iyi. Ini ndaida kugadzirisa imba yedu yekugezera uye ndaive nebhajeti diki. Ini ndaida kutaridzika kweizvi asi mamwe akafanana angave $ 100 +. Ndakatenga izvi pane whim zvichibva pane kumwe kuongorora kwakanaka uye ndichifara kuti ndakazviita. Ini ndaronga kutenga imwe yangu inotevera yekugezera kusimudzira!
Mvura inoshamisa chaizvo. Super nyore kuisa. Yazvino uye yakajeka. Inorema uye yakagadzirwa zvakanaka zvakare. Ndingatenge zvigadzirwa zvavo zvakare!
B *** k2020-07-26
Ini ndaive ndichibata pombi isina kurega mvura yakakwana ichiyerera napo. Ini ndakatenga izvi zvemuromo wedenderedzwa uye mutsauko unoshamisa. Yakanga iri nyore kuisirwa uye inotaridzika kuva yakanakisa pamwe nekuve zvakanyanya kushanda zvekuti iyo inodhura kwazvo iyo yandakatsiva. Yakakurudzirwa!
A *** r2020-07-28
Chaizvoizvo rudo! Chero chinhu chakadai muchitoro chaive zana nemakumi mashanu emadhora kana kupfuura uye hachina kuuya nechaini, izvi zvinotaridzika zvinoshamisa mubhavhu rangu! Yakakodzera peni imwe neimwe
J *** r2020-07-30
Pombi yakanaka! Yakauya nezvose zvekuisa, kusanganisira 1/2 kusvika 3/8 compression yakakodzera hoses anenge gumi nemashanu masendimita pakureba. Kekutanga nguva ini ndanga ndisingade kuenda kuchitoro kunotora zvimwe zvikamu!
J *** a2020-08-02
Ini ndanga ndisingafarire kubhadhara zana remadhora pombi yekugezera asi ndainyatsoda yakanaka.
Kwe $ 80 iyi yaive iri nani pane zvandaimbofungidzira .. Inotaridzika inodhura, inoshanda kwazvo, ndinofara ndatora mukana
P *** y2020-08-13
Mari mhinduro yekugezera, yazvino dhizaini, lever inobata uye hapana frills pop up drain isina yakapusa dhonza-up tsvimbo.
I *** l2020-08-18
Nyatso kuda aya mapombi! Yakakosha kudaro kukosha kwemari. Saka zviri nyore kuisa zvakare! Hazvigone kukanganisika neizvi.
Ini ndinoda kutaridzika kwepombi, zvinongoita kunge zvidiki kwandiri. Yakareruka kuisa ingo dai dai yaive yakati kurei. Asi zvakakodzera mari yacho.
P *** a2020-08-29
Bhegi iri rinotaridzika AMAZING mubathroom yangu. Tichave tichiraira maviri mamwe emuenzi wangu yekugezera !!
WOWOW nhema yekugezera faucet Iine Separate Handl ...
Tall Faucets YeVessel Sinks White White
WOWOW Bathroom faucet Imwechete Lever In Oiri Rubbe ...
TAURA NESU China Kero: 119Th Berth, 1st Floor No.21 Yanjiang East Road Shui Kou Town Kai Ping Guta Guang Dong Province China +86 19927601787 (9 am-18 pm GMT + 8) E-mail: sale@wowowfaucet.com
Copyright © 2020-2025 WOWOW INC .. Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.